Inona no jerena ao amin'ny Gran Canaria | Vaovao momba ny dia
Inona no ho hita any Gran Canaria
Maria | | Tanànan'ny Espana, Toerana fitsangatsanganana
Gran Canaria no nosy manana mponina betsaka indrindra amin'ireo Nosy Canary izay mandray mpizahatany an-tapitrisany isan-taona avy amin'ny lafivalon'i Eropa sy Espana. amin'ny fikarohana masoandro, ranomasina, natiora ary toetrandro tena tsara mandritra ny taona. Tsy mahagaga raha napetrak'ireo Grika taloha tao amin'ity vondronosy Espaniola ity ny angano momba ireo nosy antsoina hoe Fort fort, mitovy amin'ny paradisan'ny kolontsaina hafa.
2 Maspalomas dunes
3 Spa sy fahasalamana
4 Fanatanjahantena amoron-dranomasina sy rano
5 Fitsangantsanganana any Gran Canaria
6 Fomba fijery El Balcón
Ny renivohitry ny nosy, Las Palmas de Gran Canaria, dia tanàna iray feno habakabaka misokatra amin'ny ranomasina izay any avaratra atsinanan'ny Gran Canaria. Toerana mahafinaritra sy mahaliana tokoa ny very sy mankafy. Ny manodidina ny tanànan'ny Vegueta manan-tantara, miaraka amin'ny arabe cobbled sy ny rivotra indianina, dia manana ny sasany amin'ireo trano mariky ny tanàna: ny Katedraly Santa Ana, ny Casa de Colón na ny tranombakoka Canarian dia fitsidihana tena ilaina izay tsy tokony ho tsidihin'ireo mpitsidika.
Raha ny natiora, ny iray amin'ireo manintona an'i Las Palmas dia ny moron-dranomasin'i Las Canteras, izay iray amin'ireo morontsiraka an-tanan-dehibe tsara indrindra any Espana noho ny toetrandro tsara mandavantaona, ny fahafahany manao fanatanjahan-tena amin'ny andro rehetra amin'ny taona. amin'ny maha-tahiry lehibe ny fiainana an-dranomasina anao.
Any amin'ny faran'ny morontsirak'i Las Canteras no misy ny Alfredo Kraus Auditorium izay noforonin'ilay mpanao mari-trano Óscar Tusquets ho toy ny jiro manamarika sy miaro ny tanàna. Eto amin'ity toerana ity dia misy ny hetsika isan-karazany, na ara-kolontsaina na ara-tsosialy, ary amin'ny manodidina azy dia misy karazana tolotra hipetrahana, fialam-boly ary trano fisakafoanana mifantoka.
Ho an'ireo mpankafy fiantsenana, Las Palmas de Gran Canaria dia manana ivon-toeram-pivarotana marobe ary koa fivarotana nentin-drazana eny an-dalambe ahafahanao mandehandeha sy mankafy ny toetr'andro mahafinaritra amin'ny fijerena ny varavarankelin'ny fivarotana.
Ny iray amin'ireo harena sarobidin'ny nosy dia ny Dunas de Maspalomas, fifangaroana oasis sy tany efitra any atsimon'ny Gran Canaria izay hitondra anao any Sahara nefa tsy hiala any Eropa. Izy io dia tahiry voajanahary tsy manam-paharoa noho ny hatsarany izay iainan'ireo karazana endemika isan-karazany toy ny androngo goavambe na flamingo. Ireo dongom-boaloboka, izay miendrika rivotra tsy miova, dia mampiavaka ny tontolo andro isan'andro ka noho izany dia iray amin'ireo manintona mpizahatany ao amin'ilay faritra. Azonao atao koa ny mandeha mitaingina rameva amin'ny Dunes of Maspalomas!
Avy any ianao dia afaka mitsidika ny jiro Maspalomas, miaraka amin'ny haavo 60 metatra izay niverina hatramin'ny 1890. Any amin'ny faritra atsimon'ny nosy no misy azy ary mitohy miasa mandraka ankehitriny, izay iray amin'ireo tranainy indrindra amin'ny Nosy Canary rehetra . Ao amin'ny tranobe misy annex azy dia misy ivon-toerana kolontsaina.
Spa sy fahasalamana
150 taona lasa izay, ireo mpizahatany voalohany tonga tany Gran Canaria nanintona ny toetrany tsara dia nitady hamelombelona indray ny tenany. Androany dia nivoatra io fomba amam-panao io ary ny nosy dia iray amin'ireo toerana itodiana indrindra eropeana amin'ny lafiny fahasalamana sy fahasalamana miaraka amina spa sy spaoro maro karazana zaraina amin'ny trano fandraisam-bahiny lafo vidy sy magazay manokana.
Amin'ireny toerana ireny dia azonao atao ny mandray soa avy amin'ny fitsaboana anaty rano mafana, efitrano mangatsiaka, fandroana tropikaly, fandroana tiorka na chromotherapy mandritra ny fahafaha-manao hafa tsy misy farany.
Fanatanjahantena amoron-dranomasina sy rano
Ny andro lava sy masoandro an'ny nosy Canary sy ny toetrany tsara miaraka amin'ny mari-pana eo anelanelan'ny 19º C sy 25º C mandritra ny taona dia manasa anao hitafy ny akanjo fitondra milomano anao ary mankeny amoron-dranomasina mba hilentika ary hiala voly amin'ny ranomasina.
Gran Canaria dia manana torapasika marobe isan-karazany: manomboka amin'ny morontsirak'ireo fianakaviana miaraka amin'ny karazana serivisy rehetra ka hatrany amin'ny lava-virijina voahodidin'ny natiora. Ny sasany amin'ireo malaza indrindra dia i Playa del Inglés, Playa de las Canteras, Maspalomas na San Agustín.
Raha handeha hiaraka amin'ny ankizy, ny morontsirak'i Puerto Rico, Mogán, Anfi del Mar na Las Burras dia ampirisihina mafy indrindra, na dia mitady fitoniana bebe kokoa aza ianao amin'ny tontolo iainana dia tsy azonao adino ny morontsirak'i Faneroque, Güi-Güi na Guayéra. Mila mifidy izay mety indrindra amin'ny drafitra fotsiny ianao ary manadino ny zavatra hafa rehetra.
Etsy andanin'izany, raha tianao ny Surf, amin'ny Gran Canaria dia afaka mianatra momba izany sy fanatanjahantena rano hafa ianao mandritra ny taona. Ny avaratry ny nosy dia tsara kokoa amin'ny fivezivezena, manomboka amin'ny Confital ka hatrany Gáldar. Windsurfers sy tia kite dia manana morontsiraka saika manerana ny nosy mba hipoaka, manasongadina an'i Playa del Águila, San Agustín ary Puerto Rico.
Fitsangantsanganana any Gran Canaria
Rehefa reraky ny filentehan'ny masoandro eny amoron-dranomasina ianao, dia ataovy ny kiraronao sy ny dia an-tongotrao mandritra ny làlana sasany mamakivaky an'i Gran Canaria, nosy iray izay misy zaridaina maitso. Ny sasany amin'ireo faritra voajanahary mangatsiaka indrindra hitsidika azy dia ny Inagua sy ny tahirin-javaboary Dark Ravine, ny Nublo Rural Park, ny valan-javaboahary Tamadaba ary Pilancones na ny dongon'ny Maspalomas. Hiaina rivotra madio ianao!
Fomba fijery El Balcón
Izy io dia iray amin'ireo fomba fijery tsara indrindra hita any Gran Canaria akaikin'ny faran'ny andrefan'ny nosy. Izy io dia miorina amin'ny arabe izay miainga avy any Agaete mankany amin'ny Aldea de San Nicolás, eo amin'ny hantsana iray izay mianjera mitsangana mankany amin'ny Ranomasimbe Atlantika.
Avy eo ianao dia afaka mahita ilay antsoina hoe 'rambon'ny dragona', rindrin'ny hantsam-bato misy tendrony zigzag mampatsiahy ny ao ambadiky ny biby angano.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Inona no ho hita any Gran Canaria